China 6 layer impedance control rigid-flex board miaraka amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy mihamafy | Kangna
6 layer impedance fanaraha-maso tabilao mihetsiketsika amin'ny flexener
Karazana fitaovana: FR-4, polyimide
Min kely habe: 0.15mm
Vina matevina vita: 1.6mm
FPC hateviny: 0.25mm
Fotoana fitarihana: 20 andro
Ny fahaterahana sy ny fivoaran'ny FPC sy PCB dia niteraka ny vokatra vaovao an'ny board -flex henjana. Noho izany, amin'ny prototyping PCB, ny tabilao miovaova ary ny tabilao henjana dia atambatra mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny teknolojia mifandraika aorian'ny fanerena sy ny fomba hafa hamoronana tabilao misy fika misy ny FPC sy ny toetran'ny PCB.
Ao amin'ny prototyping PCB, ny fitambaran'ny tabilao henjana sy ny FPC dia manome ny vahaolana tsara indrindra amin'ny toe-javatra voafetra. Ity teknolojia ity dia manome ny fahafaha mampifandray am-pilaminana ireo singa ao anaty fitaovana ary manome toky ny fitoviana sy ny fitoniana amin'ny fifandraisana ary mampihena ny isan'ny plug sy ny mpampitohy.
Ny tombony hafa amin'ny solaitrabe_flex henjana dia fitoniana milamina sy mekanika, miteraka fahalalahana amin'ny famolavolana 3d, fametrahana tsotra, fitehirizana habakabaka ary fikojakojana toetra elektrika mitovy.
Fampiharana fanamboarana PCBs henjana-malefaka:
Ny PCBs Rigid-Flex dia manolotra fampiharana marobe, manomboka amin'ny fitaovana marani-tsaina ka hatramin'ny telefaona finday sy fakan-tsary niomerika. Mihabetsaka, ny fanamboarana birao henjana-flex dia nampiasaina tamin'ny fitaovana ara-pahasalamana toy ny pacemaker ho an'ny habaka sy ny fahaizany mampihena ny lanjany. Ny tombony mitovy amin'ny fampiasana PCB hentitra dia azo ampiharina amin'ny rafitra fanaraha-maso marani-tsaina.
Amin'ny vokatra ho an'ny mpanjifa, ny flex-flex dia tsy manatsara ny habaka sy ny lanja fotsiny fa manatsara ny fahamendrehana, manala ny filàna maro amin'ny tadin'ny solder sy ny tariby marefo marefo izay mora tohina amin'ireo olana mifandray. Ireto misy ohatra vitsivitsy fotsiny, fa ny PCB-Rlex-Flex dia azo ampiasaina hanararaotana ny saika fampiharana elektrika mandroso rehetra ao anatin'izany ny fitaovana fitiliana, fitaovana ary fiara.
Teknolojia PCBs henjana-Flex ary fizotry ny famokarana:
Na ny famokarana prototype mihetsiketsika na famokarana habetsahana mitaky fanamboarana PCBs Rigid-Flex lehibe sy fivoriambe PCB, voaporofo tsara sy azo itokisana ny teknolojia. Ny ampahany PCB flex dia tsara indrindra amin'ny famahana ny olana momba ny habaka sy ny lanjan'ny fahalalahana.
Ny fandinihana tsara ny vahaolana Rigid-Flex sy ny fanombanana tsara ireo safidy misy, eo am-piandohan'ny dingana famolavolana PCB henjana-flex dia hamerina tombony lehibe. Ny mpanamboatra PCB-Rlex-Flex PCBs dia tsy maintsy ampidirina am-piandohana amin'ny fizotry ny famolavolana mba hahazoana antoka fa ny endrika sy ny endriny dia samy ao amin'ny fandrindrana ary ny fitakiana ny fiovaovan'ny vokatra farany.
Ny dingana famokarana Rigid-Flex dia sarotra kokoa ihany koa ary mandany fotoana noho ny famoronana birao henjana. Ireo singa rehetra miovaova amin'ny fivorian'ny henjana-Flex dia samy hafa tanteraka amin'ny fikirakirana, ny fanaovana etotra ary ny fametahana fa tsy ny hazo fisaka FR4.
Tombontsoa azo avy amin'ny PCB-Rlex-Flex
• Ny fepetra takian'ny habaka dia azo ahena amin'ny alàlan'ny fampiharana 3D
• Amin'ny alàlan'ny fanesorana ny filan'ny mpampitohy sy tariby eo anelanelan'ireo faritra henjana isam-batan'olona dia azo ahena ny haben'ny tabilao sy ny lanjan'ny rafitra amin'ny ankapobeny.
• Amin'ny alàlan'ny fanitarana ny habaka dia matetika misy isa ambany kokoa amin'ny faritra.
• Vitsy ny mpiray solder manome toky fa azo itokisana kokoa ny fifandraisana.
• Ny fikirakirana mandritra ny fivoriambe dia mora kokoa raha ampitahaina amin'ny tabilao miovaova.
• Fomba fanangonana PCB tsotra.
• Ny fifandraisana ZIF mifangaro dia manome interface modular tsotra amin'ny tontolon'ny rafitra.
• Notsotsorina ny fepetra fitsapana. Fitsapana feno alohan'ny fametrahana azo atao.
• Mihena be ny vidin'ny lojika sy ny fivondronana miaraka amin'ny tabilaon'ny Rigid-Flex.
• Azo atao ny mampitombo ny fahasarotan'ny famolavolana mekanika, izay manatsara ihany koa ny fahalalahana hamaha ny vahaolana azo antoka amin'ny trano.
Cmampiasa FPC izahay hanoloana ny tabilao henjana?
Ilaina ny tabilao mihodina, saingy tsy hanolo ny takelaka boribory henjana ho an'ny fampiharana rehetra izy ireo. Zava-dehibe ny vidiny ,. Ny takelaka boribory henjana dia tsy lafo vidy loatra amin'ny fanamboarana sy fametrahana ao anaty trano maodely mahazatra azy.
Matetika, ny vahaolana mety indrindra amin'ny vokatra vaovao dia ny fampidirana circuitry malefaka rehefa ilaina ary mampiasa takelaka boribory henjana sy azo itokisana izay azo atao mba hitazomana ny vidin'ny famokarana sy ny fivoriambe.
Previous: FPC mora azo aidina Polyimide azo fehezina miaraka amin'ny FR4 manamafy
Manaraka: Resin plugging hole Microvia Immersion volafotsy HDI miaraka amin'ny fandavahana laser
haingana multilayer High Tg Board miaraka amin'ny fanitrihana mandeha ...